Pauline Gundidza Archives – Nehanda Radio
May 22, 2020 16,618
Urban grooves musician Pauline Gundidza says her dream has been fulfilled through her tenacious endeavours in the music industry.
Sep 18, 2019 8,625
Jul 13, 2018 1,087
Songbird Pauline Gundidza released a love song titled Ndakakumirira last week in celebration of her 33rd birthday. The song was recorded in South Africa by gTBeats, a Zimbabwean producer who also produces music for Buffalo Soldier, Beenie…
Apr 7, 2018 36,808
Urban grooves artiste, Rockford 'Roki' Josphats who had relocated to South Africa in search of greener pastures is back in Zimbabwe.
Apr 1, 2018 785
Forget Cindy Munyavi, Selmor Mtukudzi, Pauline Gundidza or even Ammara Brown, there are new sizzling hot songbirds in town.
Gary Tight, Eriza billed for Khuliyo birthday
Afro pop singer Khuliyo will be celebrating his 37th birthday with a jam session at Club 263 Bulawayo that will feature some of the best artists from Harare and Bulawayo. The birthday party will be held on March 29 with Harare artistes…
Focus on the right things: Pauline
Jan 7, 2017 465
Having gone through a turbulent period in the early stages of her career, 31-year-old songstress Pauline Gundidza who hogged the limelight in the early millennium as a member of Mafrique has realised her mistakes and wants to make a new…